Adobe Premiere Pro dia efa mandeha amin'ny Apple Silicon | Avy amin'ny mac aho
Adobe Premiere Pro dia efa mihazakazaka amin'ny Apple Silicon
Toni Cortes | 21/07/2021 18:00 | maro
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, farany Adobe Premiere Pro dia efa mihazakazaka amin'ny alàlan'ny neurons an'ny processeur M1 vaovao an'ny Apple. Izay rindrambaiko fanovana horonantsary mendrika ny sira dia tokony hanararaotra ireo fiasa amin'ny processeur an'ny ARM an'ny Apple, ary i Adobe koa dia efa manao izany.
Ka rehefa afaka enim-bolana nisedra ny kinova beta dia namoaka ny kinova vaovao an'ny Adobe Premiere Pro "recoded" ihany izy tamin'ny farany mba hihazakazahana amin'ny Apple Silicon vaovao, ary araraoty ny tombotsoan'ny M1.
Vao nanambara i Adobe fa ny tonian-dahatsoratry ny Premiere Pro dia mihazakazaka amin'ny Apple Silicons amin'ny farany nahaterahany hatramin'ny 80% haingana kokoa noho ny Mac miorina amin'ny Intel, taorian'ny enina volana mahery tamin'ny fanandramana natao tamin'ny beta.
Ankehitriny dia 80% haingana kokoa amin'ny Apple Silicon
Ity fanavaozana ity dia misy koa ny fanohanan'ny M1 ny Media Encoder sy ny Character Animator. Raha nahazo fanohanana ny M1 ny Premiere Rush sy ny Audition tamin'ny volana aprily sy mey, dia voalaza fa hahazo beta beta ho an'ny daholobe Apple Silicons amin'ny faran'ity taona ity ny After Effects.
Miaraka amin'ity kinova vaovao 15.4 an'ny Adobe Premiere Pro ity, ankoatry ny mifanentana amin'ny Apple Silicon, dia mitondra fahaizana lahatsoratra sy sary vaovao hanomezana fitaovana mpamorona bebe kokoa ny mpitantara rehefa mamorona lohanteny sy dikanteny.
Fampisehoana vaovao vaovao manomboka anio dia ny Speech to Text. Araka ny filazan'i Adobe, ity fampiasa ity dia "manome ny mpamorona ny fitaovana rehetra ilain'izy ireo mba hahatonga ny horonan-tsary misy lohateny hoe fenitra vaovao."
Ny fampiasana ny "Speech to Text" sy ny fiasan'ny dikanteny vaovao amin'ny Premiere Pro dia mampihena ny fotoana takiana mba hamoronana transcript sy dikanteny ho an'ny horonantsary 5 minitra 75%, mitahiry mpamoaka lahatsoratra manodidina ny 52 minitra
Adobe koa dia mitondra fomba vaovao hikarohana sy hitetezana ireo horonan-tsary. Ohatra, azonao atao ny manindry indroa ny teny iray ao amin'ny tontonana Text ary mihetsika mankany amin'io toerana io ny fizotran'ny premiere Pro. "Speech to Text" dia misy fanohanana fiteny 13 ary misy miaraka amin'ny famandrihana mankany amin'ny Premiere Pro na Creative Cloud All Apps tsy misy sarany fanampiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Adobe Premiere Pro dia efa mihazakazaka amin'ny Apple Silicon
Misy firmware vaovao beta ho an'ny AirPods Pro